Ike nke ALT na TAB | Martech Zone
Tọzdee, Machị 25, 2010 Mọnde, Jenụwarị 1, 2018 Robby Ogbugbu
N'ihe banyere teknụzụ kọmputa, ọ na-eju m anya na ọtụtụ ndị amachaghị nke ọma bọtịnụ abụọ dị mkpa na keyboard gị. Ike dị egwu nke ALT na TAB nwere ụfọdụ ndụmọdụ dị mkpa maka imepụta ihe maka onye ọ bụla na-eji kọmputa iji kwalite ma ọ bụ na-eduzi azụmahịa ha. Na ndị ọzọ okwu: fọrọ onye ọ bụla ugbu a na-agụ Martech!
Iji ghọta n'ezie njikọ ALT + TAB, anyị kwesịrị ịmalite na mkparịta ụka nke igodo ALT. Eleghị anya ị maara na "ALT" dị mkpirikpi maka "ọzọ." Nke ahụ pụtara na obere obere bọtịnụ a iji gbanwee ọrụ niile nke njirimara ọrụ ugbu a. Ọkachamara kọmputa mgbe ụfọdụ na-akpọ nke a "mode ịmafe." Ingpị igodo "ALT" na-agwa igwe ahụ ịkpa àgwà kpamkpam dị iche iche karịa ka ọ na-eme ugbu a.
Nke a nwere ike iyi ihe gabigara ókè. A sị ka e kwuwe, isi SHIFT yiri ka ọ na-eme otu ihe ahụ na mbụ. Mana SHIFT na-agbanwe mkpụrụedemede site na elu na obere okwu. “A” bụ otu ihe na “a.” N’ezie, akwụkwọ typewriter ochie nwere ma mkpụrụ akwụkwọ abụọ. Igodo "ALT" na-ewe igwe gị n'ime ụwa ọhụrụ.
Ndị Single ALT + TAB
Ọ nwere ike ịdị ka ọ nweghị ihe na - eme ma ị daa ALT. Pịa ma hapụ igodo ahụ ugboro iri na abụọ ma igwe Windows ma ọ bụ Mac agaghị azaghachi. Mana ọ bụrụ na ijide igodo ALT ala wee ruo gafee wee pịa igodo TAB naanị otu ugboro maka naanị nkeji nke abụọ ma hapụ igodo TAB ahụ, ị ​​ga-ahụ windo ka ọ pụta. Ọ ga-edepụta ngwa niile na-arụ ọrụ, ị ga-ahụ na nke na-esote na ndepụta ahụ apụtawo. Mgbe ịtọhapụ ALT, a ga-agbanye gị na mmemme ahụ ozugbo.
Ike nke ALT + TAB naanị nwere ike ịmepụta mmụba nrụpụta dị ukwuu. Kwesighi iwepụ aka gị na keyboard wee gaa na òké ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe n'etiti ngwa abụọ mepere emepe. Gaa gbalịa ugbu a. Wepụta oge ole na ole ịmara otú obi dị ALT + TAB.
Ọ bụrụ na ị payara ntị nke ọma na otu ALT + TAB, ị ga-amata na ọ na-agbanye n'ezie n'etiti ugbu a ngwa na ikpeazụ eji ngwa. Nke ahụ pụtara na ọ bụrụ na ịgbanwee site na ikwu, ihe nchọgharị weebụ gị na onye nhazi okwu gị na ALT + TAB, ị nwere ike ịgbanwe azụ ya na ALT + TAB ọzọ. Mgbanwe a niile na-apụta nwere ike ịdị ka igbu oge, mana nke a bụ kpọmkwem ihe anyị niile na-eme mgbe anyị na-eme nyocha na ide ihe. ALT + TAB zuru oke maka usoro ọrụ ọ bụla.
Vingchekwa obere sekọnd na-eme ka aka gị laghachi azụ site na òké ahụ adịghị ka ọ dị ọtụtụ. Mee ọtụtụ oge ọtụtụ narị switches kwa awa. Chee echiche na ị ga-akwụsị ilekwasị anya nwa oge mgbe ị ga - ahụ oke ahụ na nhụta mpụta gị wee dọrọ onye nrụrụ ahụ ala ala nke ihuenyo ahụ na azụ. Ingmuta otu ALT + TAB ga-agbanwe ọrụ gị n'ụzọ dị egwu.
E nwere ihe karịrị naanị isi. Ọ bụrụ na ị pịa ALT + TAB ma jide bọtịnụ ALT, ị ga-ahụ akara ngosi niile nke ngwa ndị na-arụ ọrụ. Nwere ike iji ugboro ugboro pịa TAB igodo iji laghachi gburugburu na mmemme ị na-eji oge gara aga. Nchikota SHIFT + TAB na-aga na-abụghị ụzọ.
Ọ bụrụ na ịnwetụla onwe gị na ịyingomi data site na otu mmemme gaa na nke ọzọ na igodo isi, ALT + TAB nwere ike ime ka ahụmịhe gị bụrụ otu naanị kiiboodu. Nke a nwere ike ịkpata ịrịba arụpụtaghị ịrịba.
Wepụta oge iji mụta ALT + TAB. Ga-eji igwe ahụ ọsọ ọsọ ma nwee ike ịrụ ọrụ karịa. Mana nke ka mkpa, mata na igodo dịka ALT dị n’ezie na-agbanwe mode nke sistemụ ndị gbara anyị gburugburu. ALT dị ka ọdịiche dị n'etiti ịrụ ọrụ na tebụl gị na ikwu okwu na ekwentị. Ọ bụ maka ịgbanwee gaa na steeti dị iche.
Ihe ntụgharị-ntụgharị bụ nnukwu ụgwọ na arụpụtaghị ihe. Nkwụsị ọ bụla na-enye gị ohere ichefu ihe ị na-eme. Chọpụta ihe ị na-eme nke ga-eme ka ị gbanwee ihe ị na-eche, ọbụlagodi na ọ sitere na kiiboodu na oke. You'll ga - ahụ na arụ ọrụ gị na - aga were were na ị ga - emekwu.
Tags: mkpado altnkumigwe
Otu onye mụ na ya na-arụ ọrụ kpọrọ m mgbe ụfọdụ 'ngwọ ngwere' n'ihi na m na-eji ihe osise eserese eserese mgbe niile. O were afọ ole na ole tupu m achọpụta etu ụzọ mkpirisi igodo ụzọ si arụ ọrụ nke ọma. N'ụzọ na-akpali mmasị, ekwenyere m na ndị ọrụ Mac na - akwụghachi ụgwọ mgbe niile site na igodo omenala bụ ndị mere nnukwu ihe. Windows ejidewo - mana imirikiti ndị enyi m na Macs dị egwu ịmara ụzọ mkpirisi niile… na nrụpụta ha gosipụtara ya!
Nov 16, 2012 na 6:03 AM
Nnukwu edemede nke m matara na abụ m onye ọrụ pc amaghị